Abụ Ọma 72 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Abụ Ọma 72:1-20
Udo ga-adị ma onye Chineke chiri eze chịwa
“Ihe ga na-agaziri onye ezi omume” (7)
Ọ ga-achị malite n’osimiri ruo n’osimiri (8)
Ọ ga-anapụta ndị a na-emegbu emegbu (14)
Nri ga-eju n’ụwa (16)
Ka e too aha Chineke ruo mgbe ebighị ebi (19)
Gbasara Solomọn. 72 Chineke, biko, mee ka eze mara ihe ndị i kpebiri,Meekwa ka nwa eze mara ezi omume ị na-eme.+ 2 Ka o kpee ikpe ziri ezi mgbe ọ na-ekpechite ọnụ ndị gị,Ka o kpeekwa ikpe ziri ezi mgbe ọ na-ekpechite ọnụ ndị ọ na-enweghị ka ọ hà ha.+ 3 Ka ugwu ukwu mee ka udo dịrị ndị mmadụ,Ka ugwu nta meekwa ka ha na-eme ezi omume. 4 Ka o kpechite ọnụ ndị ọ na-enweghị ka ọ hà ha* n’ime ndị gị. Ka ọ zọpụta ụmụ ndị ogbenye,Ka o bibiekwa onye na-erigbu ndị ọzọ.+ 5 Ha ga na-atụ egwu gị ogologo oge niile anyanwụ dịNakwa ogologo oge niile ọnwa dị,Si n’ọgbọ ruo n’ọgbọ.+ 6 Ọ ga-adị ka mmiri nke na-ezosa n’ahịhịa a sụrụ asụ,Dị ka mmiri ozuzo nke na-ede ala.+ 7 N’oge ọchịchị ya, ihe ga na-agaziri onye ezi omume,+Udo ga-adịkwa ebe niile+ ruo mgbe ọnwa na-agaghịzi adị. 8 Ọ ga-enwe ndị ọ na-achị* malite n’oké osimiri ruo n’oké osimiri,Malitekwa n’Osimiri Yufretis ruo n’ebe niile ụwa sọtụrụ.+ 9 Ndị bi n’ala ịkpa ga-akpọrọ ya isiala,Ndị iro ya ga-arachakwa ájá.+ 10 Ndị eze Tashish na ndị eze agwaetiti dị iche iche ga-atụrụ ya ụtụ.+ Ndị eze Shiba na ndị eze Siba ga-eweta onyinye.+ 11 Ndị eze niile ga-akpọrọ ya isiala,Mba niile ga-ejekwara ya ozi. 12 N’ihi na ọ ga-anapụta ogbenye nke na-ebe ákwá ka e nyere ya aka,Napụtakwa onye ọ na-enweghị ka ọ hà ya na onye ọ bụla na-enweghị onye na-enyere ya aka. 13 Ọ ga-emere ogbenye na onye ọ na-enweghị ka ọ hà ya ebere,Ọ ga-azọpụtakwa ndị ogbenye. 14 Ọ ga-anapụta ha* n’aka ndị na-emegbu ha nakwa n’aka ndị na-emesi ha ike,Ọ ga-ejikwa ndụ* ha kpọrọ ihe. 15 Ka ọ dịrị ndụ, ka e nyekwa ya ọlaedo Shiba.+ Ka a na-ekpere ya ekpere mgbe niile,Ka a na-agọzikwa ya mgbe niile. 16 Nri ga-eju n’ụwa.+ Ọ ga-eju eju n’elu ugwu dị iche iche. Mkpụrụ a kụrụ n’ubi ya ga na-eme nke ọma ka osisi ndị dị na Lebanọn,+Ndị nọ n’obodo ya dị iche iche ga na-amakwa pokopoko ka ihe a kụrụ n’ala.+ 17 Ka aha ya dịruo mgbe ebighị ebi.+ Ka aha ya na-ede ude ogologo oge niile anyanwụ dị. Ka e si n’aka ya gọzie ndị mmadụ.+ Ka mba niile kpọọ ya onye obi ụtọ. 18 Ka e too Jehova Chineke, bụ́ Chineke Izrel,+Onye naanị ya na-eme ihe ndị dị ebube.+ 19 Ka e too aha ya dị ebube ruo mgbe ebighị ebi,+Ka ebube ya jukwa ụwa niile.+ Amen na Amen. 20 Ekpere Devid nwa Jesi gwụrụ n’ebe a.+
^ Na Hibru, “Ka o kpee ndị ọ na-enweghị ka ọ hà ha ikpe.”
^ Ma ọ bụ “Ọ ga-achị.”
^ Na Hibru, “ọbara.”
Abụ Ọma 72